Qaybta galaaska ee kuleylka leh ee 15mm bir hooseeya + 15A + 15mm bir hooseeya Low-E, @ 12 mitir
Muraayada U profile galalka bannaanka
Muraayadaha U profile ee muuqaalka bannaanka Muuqaalka Nooca muraayadaha: Birta kuleylka yar ee birta U muuqaalka cabirka cabirka: 7mmX260X60mm, Dhererka = 3385mm Kale: Sawirrada qurxinta, iyo nalalka Nalalka Goobta: Qinhuangdao Shiinaha.
waxaa maamula 20-07-24
Mashruuca: Dukaanka Adidas Alaabada: Birta kuleylka yar ee U profile galaas Cabirka: 7mmX260mmX60mm Dareenka: Nashiji Dusha sare: Sandblasted gudaha
SGP kuleylka ah ayaa shubay galaas, qafiif & Jumbo
Muraayada SGP ee kuleylka leh, Curved & Jumbo Waxaan ku takhasustay galaaska ciribtirka Jumbo iyo muraayad lasaaray, cabbirka ugu sarreeya ee aan u maareyn karno @ 12.5meter dherer, dhererka arc 2.4 mitir, min radius 1300mm. Cabbirka dhalada fiidiyowgu waa 8 + 1.52SGP + 8, @ R2000mm, Arc leng ...
Saldhigga wax soo saarka ee U profile-LABER U galaas dhalo ah
Ka dib kulan gaaban oo fiidiyoow ah oo lala yeesho macmiilka reer Japan, ka qaado fiidiyow saldhigga wax soo saarkeena ee galaasyada muuqaalka U profile. Yongyu Glass® waa iskaashiyada Istaraatiijiyadeed ee LABER® U waxyaabaha soo saarka galaaska. Waxaan soo saareynaa oo aan u dhoofinaa badeecado tayo sare leh oo birta U ah alaabada dhalada. Waxaan ...
Degel cusub, bilow cusub！
waxaa maamula 20-06-26
Websaydh cusub, bilow cusub！ Si loo hagaajiyo heerka adeegga, Yongyu Glass iyo kooxda tikniyoolajiyada raadinta adduunka si ay u dardar geliyaan kor u qaadista goobta. Marka hore, macluumaadka ku jira websaydhka cusub ayaa ka sii ballaadhan, oo habeysan, macaamiisha ayaa hela macluumaadka ay ugu baahan yihiin si ka sahlan o ...
Muraayada Yongyu Oo Aad Ka Wada Shaqeysaan La Dagaallanka Faafida
waxaa maamula 20-06-06
Bishii Meey 11, 020 In kasta oo ay jirto dhibaatada ba'an ee COVID-19 ee adduunka oo dhan, Yongyu Glass wuxuu ku noqday awood soosaar 100%. Badeecadaheena ayaa daboolaya galaaska U-qaabeeya dhalada hoose / qaabka jiilka U-qaabeeya galaaska, galaaska cufan / galaaska kulul / IGU; muraayad dabacsan oo galaas ah / galaas la daboolay / IGU; DuPont SGP la ...
10m LABER® Birta kuleylka yar ee muuqaalka U profile Glass Si guul leh ayaa looga soo saaray Khadka Golaha
Qalabka heerkulka muraayadaha ee Fucheng ayaa si guul leh loogu casriyeeyay iyadoo dhererka ugu badnaan lagu diyaariyo 12 mitir. Muraayad 10-mitir U-qaabeysan ayaa si guul leh looga soo rogay khadka madasha. Macluumaad dheeri ah: 400-089-8280
Yongyu Glass, xubin cusub oo ka mid ah Ururka Ice Rink American!
Yongyu Glass wuxuu ku biirey Ururka Warshadaha Lingbing ee Mareykanka Abriil 1, 2020. Ururka 'Skat Rink Association' (horey u ahaa STAR) waa urur xubin-qaran oo aan macaash doon ahayn oo u adeegaya shakhsiyaadka, xarumaha iyo alaab-qeybiyeyaasha ku yaal barta iskeytiska iyo warshadaha arena. Aasaasay 2000 by the ...
LABER® Wejiga Weyn ee Wejiga U-profile Glass Si guul ah ayaa la bilaabay
Baan weyn oo Heerkul Kartoonsan oo Lagu Kordhiyey Muraayadaha
Cabbir ballaadhan oo qaloocsan oo hoos u jeedsan muraayad dhajis ah dherer ugu badnaan: 12.5 mitir radius uguyar: 1250mm dhererka ugu hooseeya: 2400mm dhumucda: 8-15mm Wixii macluumaad gaar ah, fadlan weydiiso: 400-089-8280
Qaboojiye U channel Qabow Codsiga Case-bmw 4s Dukaan